प्रबिधी सँम्बन्धित २० टिप्स हरु जसले तपाईंको जिवन बदल्न सक्छ । « The News Nepal
जवाना प्रबिधिको छ । आजको आधुनिक प्रबिधी मानब सभ्यतको एउटा बिशाल क्रान्ती हो भन्दा फरक नपर्ला । प्रबिधिले आज यो बिश्व लाई यती बिकशित बनाएको छ कि असम्भव भन्ने कुरा बिरलै छ ।प्रबिधिको सही सदुपयोग गर्न सके साधरण जिवनमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिने कुरा लाई पनि नकार्न मिल्दैन । तर प्रबिधिको दुरुपयोग गर्दा निम्तने बिनाश भने पक्कै पनि चानचुने मान्न सकिन्न ।
प्रबिधी को सही सदुपयोग केबल तपाईंको समय र पैसा को बचतको लागी मात्र नभई तपाईंको आफ्नो महत्वपूर्ण सुचना ईन्टरनेटमा सुरक्षित राख्न, बिश्वको अपार अबसरहरु को आगाडी आफुलाई प्रस्तुत गर्न,सँचार को माध्यम लाई अझ प्रभाबकारी बनाउन र यो प्रबिधिमुखी सँसारको भिड मा आफ्नो पृथक पहिचान बनाउन को लागी पनि हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
यो बिषयलाई आत्मसात गर्दै आज मैले प्रबिधिको अत्याधिक सदुपयोग गर्न सकिने तर हामी मध्य धेरैले कहिल्यै ख्याल नगरेका २० सहज तरिका हरु यहाँ लेख्ने मेसो मिलाएको छु ।
प्रबिधी सँम्बन्धि २० टिप्स । 20 TECH TIPS IN NEPALI
१) तपाईंले आफ्नो Excel फाइल लाई सेभ गर्दा, फाइलको नाम को अन्तिममा .xlsb नाम राखेर सेभ गर्नुभयो भने, उक्त फाइलको साइज आधा भन्दा धेरै कम्ति मा सेभ हुन सक्छ ।
२) तपाईंले साइलेन्टमा राखेको आफ्नो एन्ड्रोइड फोन आफ्नै कोठा भित्र कतै बिर्सनुभयो र खोज्दा फेला पार्नुभएन ? यसको पनि एउटा उपाय छ । त्यसको लागी तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा वा अरु कसैको एन्ड्रोइड फोनमा गएर Play Store बाट Android Device Manager नामको एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।
र उक्त एप्लिकेसन मा त्यही जि-मेल आइडी लगिन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईंको हराएको फोन मा थियो । त्यस भित्र तपाईंले Find my phone को अप्सन फेला पार्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ बाट Ring Phone क्लिक गर्नुभएपछी तपाईंको हराएको फोन मा घण्टी बज्न सुरु हुन्छ ।
३) तपाईंले कुनै गित सुन्नुभएको थियो तर त्यसको शिर्षक थाहा भएन ? र तपाईंले कुनै शब्द पनि सम्झिन सक्नुभएन ? अलि-अलि भाका त याद होलानी ? यदी तपाईंले सुन्नुभएको गितको भाका मात्रै याद छ भने तपाईं midomi.com मा गएर उक्त भाका गुनगुनाउनुस् । तपाईंले त्यो गित कुन गीत हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
४) तपाईंले ईन्टरनेट चलाउदा चलाउदै कुनै नोट सेभ गर्नुपर्‍यो भने वर्ड, नोटप्याड जस्ता अन्य प्रोग्राम खोल्नु पर्दैन । तपाईंले आफ्नो ब्राउजरमा नै data: text/HTML,<html contenteditable> टाइप गरेर अस्थाई टाइपिङ्ग प्याड खोल्न सक्नुहुन्छ ।
५) तपाईंले आफ्नो ल्यापटप १००% भन्दा पनि ८०% मात्रै चार्ज गरेर चलाउने गर्नुभयो भने ब्याट्री धेरै टिकाउ हुन सक्छ । कारण, फुल चार्ज गर्दा हुने तापक्रमले गर्दा ब्याट्री छिटो खराब हुन सक्छ ।
६) तपाईंले काम गरिरहेको ब्राउजरको ट्याब झुक्किएर बन्द गर्नु भयो ? त्यस्लाई फिर्ता ल्याउनको लागी CTRL+SHIFT+T प्रयोग गर्नुहोस।
७) सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हेर्दा ध्वनिको पुरा मजा लिन चाहनुहुन्छ भने बिच भाग तिर बसेर सिनेमा हेर्नुस । त्यो भागमा बसेर नै अडियो इन्जिनियर हरुले साउन्ड मिक्सिङको अन्तिम काम गर्ने गर्छन ।
८) dulingo.com को माध्यम बाट तपाईंले निशुल्क फ्रेन्च,जर्मन,स्पेनिश,पोर्चुगिस, र ईटालियन भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ । युरोप जाने होड-बाजी छ , काम लाग्न सक्छ ।
९) एउटा रमाईलो तर काम लाग्न सक्ने उपाय भन्छु होइ । राती को बेला कुनै एकान्त ठाँउमा हिंड्नुपर्ने छ भने प्रहरी को वाकिटकी को टोन आफ्नो फोन मा डाउनलोड गर्नुहोस र बजाउदै हिंड्नुस । 😆
१०) गुगल त प्राय चलउनुहुन्छ होला । doabarrel roll लेखेर कहिल्यै सर्च गर्नुभएको छ ? आज ट्राई गरेर हेर्नुस ।
११) गुगल बाट कुनै तस्बिर सिधा डाउनलोड गर्न को लागी ALT दबाएर तस्बिरमा क्लिक गर्नुस ।
१२) YouTube बाट गित मात्रै डाउनलोड गर्नुछ भने, भिडियो को लिँक मा www सँग listento जोडेर ब्राउज गर्नुस । जस्तै: wwwlistento.youtube.com/videourl
१३) म्याकबुक मा स्क्रीनसट लिनु छ भने Command+Shift+3 प्रयोग गर्नुहोस ।
१४) तपाईं हाम्रो फोनको चार्जरको तार किन छोटो हुन्छ, थाहा छ ? किनभने चार्ज गर्दै फोन चलाउदा ब्याट्री छिटो बिग्रन्छ । तर के गर्नु , बरु हामी प्लग नजिक उभिएरै भए पनि चलाउन छोड्दैनौ ।
१५) कहिलेकाँही फोन चलाउदा चलाउदै ह्याङ भएर चल्दै नचल्ने हुन्छ ? यदी त्यसो हुन्छ भने ब्याट्री निकाल्ने , स्विच अफ गर्ने, गर्नुभन्दा पनि चार्जमा हालेर हेर्नुस, काम गर्न सक्छ ।
१६) तपाईंले आफ्नो नाम बाट धेरै अनलाईन साईटहरु मा अकाउण्ट बनाउनु भएको छ र कुन कुन साईट मा आफ्नो नामको अकाउण्ट छ भन्ने कुरा बिर्सनुभयो भने namechk.com बाट हेर्न सक्नुहुन्छ ।
१७) कोही साथिभाई वा परिवार सदस्य प्लेनमा यात्रा गर्दैछन र उनिहरु कहाँ पुगे होलान भनेर जान्न मन छ ? छ भने गुगल मा गएर उनिहरुको Flight Number हालेर सर्च गर्नुहोस , प्लेन कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
१८) accountkiller.com को मद्दत बाट तपाईंले आफुलाई नचाहिएको जुनसुकै अनलाईन अकाउन्ट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ।
१९) अगाडी कुरा गरे , YouTube बाट गित डाउनलोड गर्ने तरिका, अब भिडियो डाउनलोड गर्ने तरिका । सायद तपाईंले ट्युबमेट जस्ता एप्लिकेसन हरु प्रयोग गर्नुहुन्छ होला । जुन आवश्यक छैन । आफुले डाउनलोड गर्न चाहनुभएको युट्युब भिडिओ को लिँन्क मा www. र youtube.com को बिच मा ss थपेर हेर्नुस । जस्तै: www.ssyoutube.com/videourl
२०) नयाँ एरफोन वा स्पिकर सेट किन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि एकपटक बजाएर, सुनेर, चित्त बुजे पछी मात्र किन्नुहुन्छ होला र यसो गर्नु आवश्यक पनि हो । तर कुन हिसाब मा चित्त बुझेको मान्नुहुन्छ तपाईं ? बेस राम्रो रहेछ ? ट्रीबल राम्रो रहेछ ? सायद यिनै कुरा हरु सुन्नुहुन्छ होला । अब देखी Bohemian Rhapsody गित बजाएर चेक गर्नुस र चित्त बुज्यो भने बल्ल किन्नुहोस । किन भने यो गीत मा संगीतको हाई पिच देखी लो पिच सम्म को सबै मिश्रण राखिएको छ र सराउन्ड इफेक्ट को प्रयोग पनि गरिएको छ ।